Wararkii ugu dambeeyay Doorashada Uganda iyo natiijooyin hor-u-dhac ah | HalQaran.com
Home Warar Cusub Wararkii ugu dambeeyay Doorashada Uganda iyo natiijooyin hor-u-dhac ah
Uganda (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya dalka Uganda ayaa sheegaya, in madaxweyne Yoweri Museveni uu tiro aad u badan ku hoggaaminaya natiijada doorashadii madaxtinimada ee khamiistii shalay ka qabsoontay dalka Uganda.
Boqolkiiba 49.1% codadkii la tiriyay ayaa waxa uu Yoweri Museveni ka heley 3.9 milyan oo la mid ah 62.7%, iyadoo hogaamiyaha mucaaradka ah uu heley 1.4 milyan oo u dhiganta 29.3%, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka.
Hoggaamiyaha mucaaradka Bobi Wine ayaa diiday natiijada hor u dhaca ah oo ay shaaciyeen guddiga, isagoo sheegtay in uu ku guuleystay doorashada isla markaana talisku sameeyay wax isdabo marin bahsan.
Natiijada rasmiga ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa Axadda, iyadoo madaxweyne Museveni markii lixaad uu u muuqdo in uu yahay ku guuleystaha doorashada dalka Uganda.
Ciidanka amniga oo aad u badan ayaa saaka lagu arkayay xaafadda uu degan yahay hogaamiyaha mucaaradka, isagoo sheegay in ciidanku hoygiisa xoog ku galeen isla markaana xireen qaar kamid ah ilaaladiisa.
Guddiga doorashada waxaa uu beeniyay eedda uu soo jeediyay Bobi Wine oo sidoo kale loo yaqaano Robert Kyagulanyi kaas oo ahaa heesaa caan ah isla markaana sheegtay in uu matalayo da’yarta reer Uganda.
Korjoogtada doorashada ee ka socota Midowga Afrika ama bulshada bariga Afrika midna kama hadal eedeymaha la soo jeediyay oo ah in ay jirto wax isdabo marin.
Museveni oo Uganda soo maamulayay muddo 35 sano ah ayaa markii 6 aad hogaamin doona dalka bariga Afrika ku yaala oo ay ku nool yihiin 46 milyan oo dhallinyaro u badan.
In ka badan daraasiin hey’addo aan dowli aheyn ayaa xukuumadda Uganda ugu baaqay in la sii daayo 26 kormeeriyaal reer Uganda ah oo khamiistii la xirey ka dib markii lagu eedeeyay in ay sameeyeen goobo aan sharci aheyn oo codadka lagu tiriyo.
Doorashada dalka Uganda
natiijooyin hor-u-dhac ah